Toddobaadkan aan sanadka badalnay, Warka yar ee la xiriira Apple ayaa runtii soo baxa. Toddobaadka bilaabmaya berri waa hubaal inuu bilaabayo inuu mar kale warar noo keeno ka dib dhammaadka xilligii fasaxa ee wiilasha Cupertino. In kasta oo uu dhammeeyay sanadka iyo sida isticmaaleyaasha badani filayeen, Ugu dambeyntii ma aanan awoodin inaan ku raaxeysano Jailbreak loogu talagalay iOS 9.2, sida ay sheegayaan wararka xanta qaarkood, laakiin waxay u muuqataa in u dhawaanshahaani uusan aheyn waxay ahayd mid dhab ah sida xilligooda ay noo tilmaameen.
Toddobaadkan ayay mar kale ka soo muuqdeen warar xan ah oo la xiriira iPhone 7 cusub. Inkasta oo ilaha qaarkood ay sheeganayaan in qalabku noqon doono mid quusin kara, qaar kalena waxay tilmaamayaan in noocaasi yahay Plus wuxuu lahaan lahaa ilaa 256 GB oo keyd ah iyo batari 3100 mAh ah. Dhab ahaantii maanta saaxiibkeen Miguel wuxuu daabacay maqaal kaas oo sida muuqata shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ay lahaan lahayd si aad ah hoos loogu dhigay wax soo saarka iPhone 6s iyo 6s Plus. Ku sii wadista soo saarista iPhones-ka cusub, Apple waxay ku dhowdahay inay xirto heshiis ay la gashay LG iyo Samsung si markaa laga bilaabo sanadka 2017, ay bilaabaan inay siiyaan shaashadda iPhone-ka soo socda teknolojiyadda OLED.
Mar labaad, wararka la xiriira iPhone-ka ayaa mar kale soo muuqanaya halka qalabkani uu ku dhacay waxoogaa qasaaro ah. Markan waxay umuuqataa iphone ayaa qarxay inta isticmaaleha isticmaalayay. Si sax ah usbuucan Waxaan ku tusnay laba codsi oo dhaqan ahaan loo bixiyo iPhone-ka, kuwaas oo loo heli karo soo degso gabi ahaanba bilaash. Midka koowaad waa Runtastic Pro GPS, oo leh qiimo joogto ah 4,49 euro halka barnaamijka Union ee sawir celinta, si toos ah ayaan uga soo dagsan karnaa barnaamijka Apple Store.
Saamiyada Apple ayaa dhacay markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2008
Xagee laga iibsadaa iPhone: Ikhtiyaarkee ayaan aad u xiiseeyaa?